Namboarin'izy ireo ho famantaranandro paosy | ny Apple Watch Avy amin'ny mac aho
Namadika ny Apple Watch ho famantaranandro
Mbola kely sisa ny sisa tavela ho azy Apple Watch amidy any Espana. Ireo magazay Apple samy hafa dia motera fanafanana hanovana ny fizarana anatiny na amin'ny fanaka na amin'ny asan'ny mpiasa ka ny saina azo omena ny mpividy no mety indrindra.
Efa ela talohan'ny namarotana azy tany amin'ny onja voalohany tany amin'ny firenena, Apple dia nanao ny Apple Watch ho hita eo am-baravarankely sasany, azo alaina sary izany ary miseho ho toy ny fonon'ny magazine malaza na omena an'ireo olo-malaza nanambara izany tamim-piravoravoana.
Fito andro aorian'ny fampisehoana any Espana dia lazainay aminao ny anekdota vaovao ary izany ilay mpamorona Tom Ford Ianao dia naneho ny fanangonany ho an'ny lohataona 2016 tamin'ity herinandro ity sy ny fotoana nandehanany ny seho niaraka tamin'ny palitao noforoniny Hitany ilay maodely nisintona Apple Watch avy tao am-paosiny palitao.
Na izany aza, ny Apple Watch dia tsy olona irery fa namboarina ary nivadika famantaranandro miaraka amin'ny tady mifanaraka aminy. Nahavita namadika ny Apple Watch ho famantaranandro efa taloha izy ireo. Araka ny efa nampoizina dia tsy ela ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambajotra sosialy ary nisy ny savorovoro nipoitra ka nahatratraran'ilay mpamorona izay notadiaviny, avelao horesahina amin'ny pejy an-tapitrisany ny fanangonana azy.
Ny fomba nanovan'i Ford ny Apple Watch ho famantaranandro mamorona adaptatera roa izay mameno ny banga izay misy crimped ny tadiny voalohanyNy adapter ambony dia misy peratra izay ampidirina amin'ny rojo. Mazava fa ny famantaranandro dia azo hanaovana toy izao tanteraka, saingy tsy hahatanteraka ny tanjony intsony, izany hoe mandrefy ny tahan'ny fo na mampitandrina anao amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny fampahalalana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Namadika ny Apple Watch ho famantaranandro
Apple Music launch dia hanasongadina ireo onjam-peo 28 manerantany
Tonga ny tsaho momba ny Apple Watch 2 ary tsy afaka mividy ilay voalohany izahay ...